27% Suuqleyda Ma Lahan Qorshayaal Kiniin Ah ... Haddana! | Martech Zone
27% Suuqleyda Ma Lahan Qorsheyaal Kiniin… Haddana!
Jimco, Janaayo 27, 2012 Douglas Karr
Waxaan jecel nahay in aan yeelano kafaala qaade weyn sida Zoomerang iyo kooda barnaamijka doorashada ee bilaashka ah si loo ogaado waxa iyo sida ay suuqyadu u dareemayaan waxyaabahayaga iyo in la siiyo aragti ku saabsan xeeladaha ay dejinayaan. Ra'yi ururinteenii ugu dambeysay ayaa wax laga weydiiyay qorshooyinka loogu talagalay suuqleyda markay tahay suuqa kiniinka.
Sannadkii hore, Forrester ayaa saadaaliyay koritaanka weyn ee akhristaha iyo kiniiniga suuqa - oo suuqa la soo saaray. Kuma soo saarin iib fudud, laakiin sicir-dhimista gardarrada ah ee akhristayaasha iyo kiniiniyada ayaa ka dhigaysa iyaga kuwa ka jaban kan taleefannada gacanta!
Maxay taasi uga dhigan tahay ururkaaga? Nasiib wanaagse, qiyaastii 50% ka mid ah dhagaystayaasheena ayaa sheegay inay qorsheynayeen sidii ay ugu hagaajin lahaayeen goobahooda isticmaalka kiniiniga…. laakiin layaab leh 27% ayaa sheegay inaysan haba yaraatee wax qorshe ah lahayn!
Waxaan saadaal u samaynayaa dadkaas here 2012 qaadashada kiniiniyada ayaa kaa dhigi doonta inaad dib uga fikirto qorshooyinkaaga. Akhristayaasha iyo kiniiniyada waxay bixin karaan khibrad akhris oo u gaar ah oo celceliska degelku aanu soo saari karin. Codsiyada otomaatiga ah ee daabacaadda, maktabadaha cusub ee kumbuyuutarrada lagu hagaajiyo iyo mawduucyada CMS ayaa lagu sii daayaa si aad u sarreeya, iyo bogagga jawaabta leh (ee u dhigma cabbirka shaashadda kiniinka) ayaa u fududeynaya nolosha naqshadeeyayaasha.